Soomaaliland oo soo dhaweysay heshiiska ay ku ogaalatay saldhigga milateri ee dowladda Imaaradka Carabka laga siiyay Berbera | RBC Radio
Soomaaliland oo soo dhaweysay heshiiska ay ku ogaalatay saldhigga milateri ee dowladda Imaaradka Carabka laga siiyay Berbera
Gaalkacyo (RBC Radio) Soomaaliland ayaa si rasmi ah heshiis ula gashay dowladda Imaaradka Carabta,wuxuu heshiiskan ogaalanaya in magaalada Berbera saldhig milateri laga siiyo dawladda Isku taga Imaaraadka Carabta.
Heshiiskan waxaa shalay magaalada Dubai ku saxiixay mas’uuliyiin ka socda Soomaaliland iyo wakiillo metelaya dawladda Imaaraadka Carabta,wuxuuna daba socda go’aan ay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland dhowaan ku ansixiyeen qoddobada is af-garadka heshiiskaasi.
Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland,Cabdiraxmaan Seylici wuxuu sheegay heshiiskan inuu faa’iido u yeelanayo Soomaaliland,waxaa kalo uu muujiyay inuu yahay heshiisyadii kowaad ee caalami ah ee dunida horumartay ay Somaliland la gasho.
“Dabcan saldhigyadu qiimaha ay leeyihiin waa la garan karayaa, saldhig milateri ayaanu siinay dowladda Imaaraadka, iyagoo noogu bedelaya mashaariic horumarineed, faa’iidada aan ka helayno mashaariicdaasi ayaa ka mid ah”.ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland.
Heshiiska lagu gaadhay in magaalda Berbera saldhig militeri laga siiyo dawladda imaaraadka ayaa buuq badan dhaliyay,sidoo kalena mudaharadyo lagaga soo horjeedo ayaa ka dhacay meelo kala duwan.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa dhankeeda horay u sheegtay inaysan aqbali doonin heshiiska oo ay ku tilmaameen inuu dhaawacayo midnimada Soomaaliya.
Heshiiskan oo ka kooban toddobo qodob wuxuu u dhignaa sidan:-
1-Soomaliland waxay ogolansho siisay in Ciidamada Dowladda Imaaraadku isticmaalaan garoonka diyaaradaha ee Berbera.
Dowladda Imaaraadka inuu Garoon diyaaradeed oo cusub ka dhiso Berbera , kaasi oo ay isticmaali doonaan diyaaradaha rikaabka.
2-Jidka isku xira Berbera iyo Togwajaale oo dheerarkiisu yahay 250km ayaa ka mid ah mashaariicda la fulin doono.
-Mashaariic kale oo la fulin doono iyana waxay la xiriiraan Biyaha, Tamarta , Caafimaadka iyo waxbarashada. dhamaan mashaariicdaasi waxaa lagu fulin doonaa Saddexda sanno ee soo socota.
3-Dowladda Imaaraadku waxay suuqyadeeda shaqo u furi doontaa muwaadinniinta Soomaaliland.
4-Dowladdu Imaaraadku waxay taageeri doontaa shirkadaha maalgashiga imaaradku inay maalgashtaan Somaliland
5- Imaaraadka iyo Somaliland waxay iska kaashan doonaan dhinaca Ammniga
6-Wuxu heshiiskan albaab cusub u furi doonaa Somaliland iyo Beesha Caalamka.
7-Ugu danbeyntii waxay labada dhinac isla garteen in Imaaraadku gargaar deg deg ah gaarsiiyo dadka Abaartu saameysay.
Heshiiskan waxaa dhinaca Somaliland u saxiixay Wasiirka Arrimaha dibadda Sacad Cali shire , halka dhinaca Imaaraadka uu u saxiixay Maxamed AL-Zuweydi oo metalayey Dowladda imaaraadka.